Uhlelo Lokuhlabisa Abantwana Amajekiseni Okuvikela Imikhuhlane, Luqhubeka Kuhle, Kodwa Izikhubekiso Zikhona
Uhlelo lukahulumende lokuhlaba amajekiseni okuvikela imikhuhlane evame ukuhlasela abantwana oluqale ngoMvulo odluleyo luqhubeka kuhle kakhulu kuzigaba zonke zelizwe, kubika inhlanganiso ye United Nations Children’s Fund- UNICEF, ephathisa kuloluhlelo.
Ugatsha lwezempilakakhle lusebenza ndawonye layo i UNICEF, i World Health Organisation lezinye eziphathisa ekuthuthukiseni ezempilakahle elizweni. Kukhangelelwe ukuthi kusiya phela umkhankaso lo ngoLwesithathu kube sokuhlatshwe abantwana abedlula izigidi ezinhlanu.
Umsakazo weZimbabwe broadcasting corporation ubike ukuthi ngemva kwamalanga amathathu kusungulwe umkhankaso lo besekuhlatshwe abantwana abedlula izigidi ezimbili. Namhla abe UNICEF bebesemhlanganweni wokuqoqa inani labantwana asebehlatshiwe, lokuthi umkhankaso lo uqhubeka njani.
Kulemibiko ethi kwezinye izigaba zelizwe abokholo lwesipositoli bebengaphatheki kuhlelo lokuhlabisa amajekiseni bevimba abantwababo ukuya ezikolo lapha abantwana akade behlatswa khona amajekiseni.
UBrenda Moyo weStudio 7 ukhulume lomeli wesigaba seGwanda south ephalamende uMnumzana Thandeko Zinti Mnkandla ochasisa akubone kusenzakala esigabeni sakhe